Political Page ပုလဲသွယ်: လက္ခဏာရေး
• (ဆရာ)့့ ဒို့ဆိုင်ကယ်က
• တီတီတီတီ ဟွန်းရှည်တီးပြီး ကျော်တက့့်
• ဘာ ရသ လဲ လူလေးတို့ ?
• (တပည့်များ) မရဏ ရသ ပါ ဆရာ့့
• (ဆရာ)့့ good !
• ဆရာ့့
• တော်တီတော်တီ အသံမည်ကား၊
• ခွဲခြားမရ ဖယ်ပေးကြရတာလဲ၊
• မရဏ မဟုတ်သေးရင် အနိစ္စနဲ့ ဒုက္ခပါဆရာ။